Lammiilee buqqa’an qayeetti deebisuuf hojjetamaa jira – Fana Broadcasting Corporate
Finfinnee, Caamsaa 8,2011(FBC)- Lammiilen naannoo Oromiyaa daangaa godina baha Wallaggaa fi Beenishaanguul Guumz, akkasumas naannoo Amaaraatii buqqa’an gara qayee isaaniitti deebi’aa jiru.
Rakkoo nageenyaa naannoo Beenishaanguul Guumz godina Kamaashii fi naannoo Oromiyaa baha Wallaggaatii uumamee tureen, lammiileen Wallagga bahaa qubatanii turan kumni 69 ol guutummaan gara dhufanitti akka deebi’an hojjetamaa jiraachuu bulchaan godinichaa obbo Birihaanuu Baqqalaan himaniiru.
Deebitoonnis qonna Gannaa akka dhaqqabatan hawaasa naannoo waliin dirmannaan hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru.
Naannoo Amaaraa Goondar jiddugalaa fi lixatti rakkoo nageenyaa mudatee tureen lammiileen qayee fi qabeenya isaanitirraa buqqa’an gara qayee isaaniitti akka deebi’an hojjetamaa jira jedhan bakka bu’aan Waajjira Bulchiinsa Sodaa Balaa Goondar Jiddugalaa obbo Abdallaa Nuur.
Amma ammaattis jiraattonni Goondar jiddugalaa fi lixatti kumni 17 ol gara dhufanitti deebi’aniiru.